Dib u mideynta qoysku waxey ku dhowaad markasta u baahan tahay dhaqaalaha nolosha oo dammaanad-qaadan - Asylum in Finland
Dhaqaalaha damaanad-qaadan ee nolosha qoyskaada waxaa loola jeedaa, in aad leedahay hanti kugu filan oo aad ku biilan karto qoyskaada. Haddii aad tusaale ahaan leedahay xaas iyo labo cunug, canshuuraha kaddib qoyskaada waa in ay u soo hartaa 2600 oo yuuro bishii.
Dakhli waxaa loo xisaabiyaa dakhliga mushaarkaada, dakhliga kaa soo gala hawlo ganacsi ama hantidaada. Waxaa sidoo kale dakhli ahaan loo xisaabiyaa manfacyo cayiman oo ammaanka bulshada Finnishka kamid ah, sida dheeraadka ilmaha, kaalmada waxbarashada ama kaalmada kirada.
Lagaama doonayo shuruudda dhaqaalaha nolosha, haddii
• aad megangelyo ka heshay Finland
• qoyskaaduna uu sameysmay kahor imaanshahaadi Finland
• xubnaha qoyskaaduna ay codsadaan ogolaanshaha degitaanka saddex bilood gudohood laga soo billaabo marki lagu ogeysiiyay go’aanka ogolaanshaha ah ee megangelyada.
Haddii dhaqaalahaada noloshu uusan damaanad-qaadneyn, ma dhaceyso in xubnaha qoyskaadu kuugu yimaadaan Finland. Shuruudda dhaqaalaha nolosha waxaa lagu dhaafi karaa sababo aad culus dartood ama in danta cunuggu sidaas ku jirto.